Kukhuthazwe osomabhizinisi ukuthi babheke amathuba embonini ye-Halal bangagcini ngemikhiqizo yokudla kuphela. INTATHELI yoMBELE iyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
IsiKhulu esiPhezulu seTrade and Investment KwaZulu-Natai uMnu uNeville Matjie
Kukhuthazwe osomabhizinisi ukuthi babheke amathuba embonini ye-Halal bangagcini ngemikhiqizo yokudla kuphela. INTATHELI yoMBELE iyabika
UKWAKHA amathuba emisebenzi entsheni, ukufukula umnotho waseNingizimu Afrika nokulwa nobubha ngezinye zezinto ezigcizelelwe yizikhulumi ebezisengqungqutheleni yokuhweba nokutshala imali iKwaZulu-Natal Trade & Investment Indaba and World Halal Day ebiseThekwini.
Le ngqungquthela, ebiyizinsuku ezintathu, ibihlelwe yiTrade and Investment Indaba KwaZulu-Natali (iTIKZN) ne-United World Halal Development (i-UWHD).
UNgqongqoshe wokuThuthukisa umNotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natali uMnu uRavi Pillay uthe ingaphezu kuka-12 000 imisebenzi esungulwe ngenxa yokukhula kwemakethe yemikhiqizo ekhiqizwe kulandelwa imigomo ye-Halal. Ukuthi halal kusho okuvunyiwe ngokwesiko noma ngokwenkolo.
Uthi u-55% kuya ku-60% womnotho wesifundazwe useThekwini kanti leli dolobha yilona elikwazi ukumelana nokufunwa yimakethe. Uthi umnyango wakhe usuvele usezingxoxweni nezinkampani zaphesheya ngemizamo yokwenza kabusha ichweba lesifundazwe nezinye izakhiwo ukubhekana nokudingwa yimakethe ye-Halal.
UMnu uRavi Pillay, uNgqongqoshe womNyango wokuThuthukisa umNotho
“Akudingeki ukuthi ube yiSulumane kodwa kufanele ukwazi ukumelana nezidingo zemakethe ye-Halal. Imakethe ye-Halal isiyakhe imisebenzi engaphezu kuka-12 000 eminyakeni emithathu, kanti siyiKwaZulu-Natali sivule izandla ukusebenza nemakethe yayo futhi sikulungele ukubhekana nezidingo zayo,” kusho yena.
USihlalo we-UWHD uMnu uMohammed Jinna uthe imboni ye-Halal ikhule ngo-$6.3 trillion futhi ikhombise ukudingeka kakhulu eNingizimu Afrika.
Uthe bebesebenza ukuthola abatshalimali abafanele bezotshala ekukhuleni kwemboni ye-Halal, naye agcizelele ukuthi akuyona eyamaSulumane kuphela.
Enye yezinto ezethulwe kule ngqungquthela yiFood Bank, indawo lapho kukhuthazwa khona noma wubani ukuthi anikele ngokudla okuzophiwa abahlwempu. Loku kuyingxenye yomkhankaso we-World Halal Day wokuzama ukuqeda indlala emhlabeni njengoba kuthiwa kufanele okungenani wonke umuntu athole isidlo esisodwa ngosuku.
UMnu uMohammed Jinna, uSihlalo we-UWHD
I-project director ye-UWHD uMnu uSyed Imran uthe ukwethula kwabo i-Food Bank yesihlanu kuhambisana nemigomo yeWorld Halal Day, onhloso yayo wukulwa nobubha, ukuvikela imvelo nokuqinisekisa ukuthi abantu abasweli ukudla futhi abaphelelwa yisithunzi ngaso sonke isikhathi.
Emasontweni amathathu edlule iBhange loMhlaba likhiphe umbiko obubheka ukungalingani emazweni aseNingizimu ye-Afrika kanti iNingizimu Afrika yiyona ehamba phambili emazweni awu-164 akhungethwe wububha.
“Sibonile ukuthi inkinga enkulu umhlaba wonke yindlala nokuthi likhulu kakhulu igebe phakathi kwabantu abampofu nabacebile. Ukudla yisona sidingo esikhulu, nokwenza abanye bantu bantshontshe ngenxa yephango. Esikwenza manje kuqala njengekhwelo nje, esikholwa wukuthi kungasiza ukulwa nokunciphisa izenzo zobugebengu,” kusho u-Imran.
Ngokwe-Global Humanitarian Overview 2022 babalelwa ku-811 million umhlaba wonke abantu abakhungethwe yindlala ngo-2020, okusho ukwenyuka ngo-161m kusukela ngo-2019. I-Global Crisis embikweni wayo wenkinga yokudla ingathisekele ku-161m wabantu abasemazweni awu-42 ababhekane nenkinga yokuswela ukudla ezinyangeni eziyisishiyagalombili zokuqala zango-2021.
ISikhulu esiPhezulu seTIKZN uMnu uNeviille Matjie sithe kumqoka ukuthi izingqungquthela ezinjengalena zingagcini nje ngokubhunga ngokutshala imali namathuba amabhizinisi. Uthe kufanele zibheke nezinkinga ezibheke nomphakathi nokuthi yiliphi iqhaza ongalibamba kuzona.
Kule ngqungquthela kuxoxwe nangamathuba akhona embonini yezempilo, ezemfashini nezikaqedisizungu kulandelwa imigomo ye-Halal.
Ivulele ithuba nosomabhizinisi abangaphezu kuka-50 abebenemibukiso yemikhiqizo yabo.
Usekwazi ukondla kubo obegconwa wontanga ezihlupha ngokufunda umsebenzi wezandla. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE